किन भए यति धेरै मत बदर ? - Naya Patrika
किन भए यति धेरै मत बदर ?
दोलखबहादुर गुरुङ | जेठ ०३, २०७४
मतदाताले दुःखले दिएको अमूल्य मत बदर हुनुमा मुख्य जिम्मेवार निर्वाचन आयोग नै हुन्छ
भर्खरै स्थानीय तहको पहिलो चरणको निर्वाचन सम्पन्न भएको छ । निर्वाचनपछि मतगणना पनि सुरु भएको छ । मतगणनाका क्रममा निर्वाचनमा खसेका बदर मतको संख्या निकै बढी देखिएको छ । यससँगै मत बदर हुने या मतपत्र बदर हुने भन्ने अन्योल पनि आममतदाता र सरोकारवालामा रहेको देखिन्छ । सबैले बुझ्नुपर्ने विषय यो हो कि मतपत्र कहिल्यै बदर हुँदैन । बदर हुने मतदाताले खसालेको मत मात्रै हो । एउटा मतपत्रमा धेरै उम्मेदवारका चुनाव चिह्न हुन्छन् । उदाहरणका लागि स्थानीय तहको पहिलो चरणको निर्वाचनमा एउटै मतपत्रमा ७ स्थानमा मत हाल्ने व्यवस्था गरिएको छ । मानौँ एउटा मतदाताले खसालेको ७ वटै मत बदर भए पनि त्यो मतपत्र भने बदर हुँदैन, उसले खसालेका मत मात्रै बदर हुने हुन् ।
यसभन्दा अघिल्ला दुई निर्वाचनमा बदर मतको प्रतिशत हेर्दा ०६४ सालको पहिलो संविधानसभा निर्वाचनमा भन्दा ०७० सालको दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनमा कम मत बदर भएको देखिन्छ । ०६४ सालमा प्रत्यक्षतर्फ पाँच दशमलव ६६ र समानुपातिकतर्फ तीन दशमलव ९४ प्रतिशत मत बदर भएका थिए । ०७० सालको संविधानसभा निर्वाचनमा यो घटेर प्रत्यक्षतर्फ चार दशमलव ६६ र समानुपातिकतर्फ तीन दशमलव २० प्रतिशत बदर भएको निर्वाचन आयोगको तथ्यांकले देखाएको छ । अहिले नयाँ प्रकृतिको मतपत्र भएकाले अहिलेसम्मको ‘ट्रेन्ड’ हेर्दा बदर मतको संख्या केही बढ्छ कि जस्तो देखिन्छ । तर, ठोकेरै बढिहाल्छ भन्ने अवस्था भने छैन । त्यसमा पनि हिसाब गरेर मात्रै बदर मतको प्रतिशत निकालिन्छ । मेयरमा कति, उपमेयरमा कति, वडा अध्यक्षमा कति र वडा सदस्यमा कति मत बदर हुन्छ र समग्रमा कति मत बदर हुन्छ, त्यसबाट मात्रै बदर मतको प्रतिशत निकाल्न सकिन्छ ।
कस्तो अवस्थामा मत बदर हुन्छ ?
मतदाताले सही मत नदिएको अवस्थामा मत बदर हुने हो । जस्तो एउटा उम्मेदवारलाई मात्रै मत दिनुपर्नेमा दुई वा दुईभन्दा बढी उम्मेदवारका चुनाव चिह्नमा मतको चिनो लगाएमा त्यो मतदाताको मत बदर हुन्छ । चुनाव चिह्नमा स्वस्तिक छाप लगाउनुको सट्टा ल्याप्चे लगायो भने पनि बदर हुन्छ । नचिनिने गरी लतपत गरेर स्वस्तिक छाप लगाएमा पनि त्यस्तो मत बदर हुन्छ । दुईवटा चुनाव चिह्नको बीचमा छाप हानेको भएमा पनि बदर हुन्छ । चुनाव चिह्नमा छाप लगाएपछि फोल्डिङ गर्दा लतपत भएको अवस्थामा पनि मत बदर हुन्छ । जतिवटा चुनाव चिह्नमा छाप लगाउनुपर्ने हो, त्योभन्दा बढी लगाए पनि बदर हुन्छ । तर, जतिवटा चुनाव चिह्नमा लगाउनुपर्ने हो, त्योभन्दा कम चिह्नमा छाप लगाए मत बदर हुँदैन ।
मत बदर हुनुमा दोषी को ?
मतदाताले दुःखले दिएको मत बदर हुनुमा मुख्य जिम्मेवार निर्वाचन आयोग नै हुन्छ । मतदातालाई मत कसरी खसाल्ने भन्ने विषयमा एथेष्ट जानकारी दिने दायित्व निर्वाचन आयोगको हो । त्यससँगै निर्वाचनमा भाग लिने राजनीतिक दल र उम्मेदवार बनेकाहरूले पनि मतदातालाई मत खसाल्ने विषयमा पर्याप्त जानकारी दिनुपर्छ । मत कसरी खसाल्ने, कतिवटा चुनाव चिह्नमा कसरी छाप लगाउने, कस्तो अवस्थामा मत खेर जान्छ जस्ता विषयमा मतदातालाई समयमै जानकार गराउनु निर्वाचन आयोग, राजनीतिक दल र उम्मेदवार सबैको दायित्व हो । मतपत्र, मतदान गर्ने तरिका आदिबारे सबै जानकारी लिएर आफ्नो मतको उपयोग गर्नु मतदाताको पनि जिम्मेवारी हो । निर्वाचन आयोगसँग सम्बद्ध भएर लामो समय काम गरेको अनुभवबाट मैले कतिपय जान्ने–बुझ्ने मतदाताले पनि जानीजानी बदर गराएको पाएको छु । तसर्थ मत बदर हुनुमा निर्वाचन आयोग, राजनीतिक दल, उम्मेदवार र मतदाता स्वयंसमेत जिम्मेवार हुन्छन् । मतदाता स्वयंले मतदानबारे सिक्ने चाहना लिएर सही ढंगले सिकेर मत दिनुपर्छ । मत बदर गर्नु, आफ्नो अधिकार प्रयोग गर्न नजान्नु हो । मतदाता शिक्षाको उद्देश्य मत बदर नगराउनु हो । अहिलेको मत बदर हुनुको मुख्य समस्या भनेको मतपत्र ठुलो हुनु पनि हो । निर्वाचन आयोगले एउटा भनेर दिएको मतपत्रमा ६ वटा मतपत्र छन् । त्यसलाई ७ वटा मानिदिएको भए हुन्थ्यो । तर, आयोगका तर्फबाट ६ वटा भनिएको छ ।
मत बदर न्यूनीकरण गर्न के गर्ने ?
बदर मतको प्रतिशतमा कमी ल्याउन मतदाता शिक्षालाई सबलीकरण गर्नुपर्ने पहिलो आवश्यकता हुन्छ । मतदाता शिक्षाको मुख्य उद्देश्य मतदाताको सहभागिता बढाउने र बदर मत घटाउने नै हो । यसका लागि आयोगले पर्याप्त मतदाता शिक्षक तालिम सञ्चालन गरी गाउँगाउँ, टोलटोलसम्म पु¥याउन सक्नुपर्छ । मतदाता शिक्षकले पनि जनतालाई सुसूचित गराउने आफ्नो दायित्व सशक्त र प्रभावकारी ढंगले पूरा गर्न सक्नुपर्छ । अहिले पहिलो चरणको निर्वाचनमा जे हुनु भइहाल्यो, यसलाई अहिल्यै सच्याउन सकिने होइन । तर, यसपटकका कमी–कमजोरीबाट पाठ सिकेर अब आगामी दिनमा सञ्चालन गरिने दोस्रो चरणको निर्वाचनका लागि आवश्यक पूर्वतयारी गर्नुपर्छ । निर्वाचन आयोगले पनि बदर मतबारे तत्काल समीक्षा गरेर के कारणले मत बदर हुन्छ ? यसलाई कसरी न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ भनेर थप गृहकार्य गर्नु जरुरी छ । आयोगले मतदाता शिक्षकमार्फत मतदाताको घरघरमा पुगेर मतदाता शिक्षा दिनुपर्छ । मत कसरी खसाल्ने भनेर घरघरमा पुगी सिकाउने जिम्मेवारी निर्वाचन आयोगको हो । सञ्चारमाध्यमबाट पनि मतदाता शिक्षाबारे प्रचार–प्रसार गर्न सकिन्छ । यसले शिक्षाको पहुँचबाट टाढा भएकाहरूलाई बदर मत कम गराउन सहयोग पुग्न सक्छ । सबैभन्दा पहिला निर्वाचन आयोगले राजनीतिक दल र उम्मेदवारलाई ‘ओरियन्टेसन’ दिएमा उनीहरूले पनि आफ्नो पक्षमा मतदातालाई सिकाउने भएकाले अलि सहज हुन सक्छ । आयोगको मतदाता शिक्षा कार्यक्रम सचेतनामूलक र जानकारीमूलक हुनु आवश्यक छ । अहिले देखिएका आफ्ना कमी–कमजोरी हटाएर निर्वाचन आयोग अघि बढ्यो भने यो समस्या बिस्तारै न्यूनीकरण हुँदै जान्छ । आयोगले अब विशेष रूपमा मत गणनामा भइरहेको ढिलाइलाई पनि न्यूनीकरण गर्न सक्नुपर्छ । अहिले ढिलाइले आयोगप्रति नै जनताको गुनासो बढ्न सक्छ । त्यसैले, जनतालाई लामो प्रतीक्षामा राख्नु हुँदैन ।
(गुरुङ पूर्वकार्यबाहक प्रमुख निर्वाचन आयुक्त हुन्)